High purity titanium up to 5N in its purest form, mainly used in CVD, izinto zokuhwamuka, preparation of sputtering targets, ukuqoshwa kazibuthe, optoelectronic devices, magnetic sensors and integrated circuits and other materials.
Electronic coating, CVD coating, alloy additive, single crystal high temperature alloy, high entropy alloy additive, aerospace for semiconductor, ilitshe elilunguzayo, offshore oil, njll.
Imininingwane ejwayelekile Ukuhlanzeka okuphezulu kwe-titanium wire Diameter: 3mm, 6mm, 10mm noma ngokuya ngezidingo zamakhasimende I-High purity titanium bar 20 * 20mm, noma ngokuya ngezidingo zamakhasimende. Ubumsulwa obuphezulu be-titanium ingot Ububanzi: 150mm, noma njengoba kudingeka.
1、Singakwazi ukucubungula nokwenza ngezifiso usayizi wezinhlayiyana ohlukile ngokuya ngemfuneko yamakhasimende.
2、Ukupakisha: ibhokisi lokhuni, noma ngokuya ngemfuneko yekhasimende.
Okwedlule: Induku yeTitanium
Olandelayo: Izingxenye zokucubungula zeTitanium
Ibhulokhi eliyindilinga le-Titanium